Webiga ugu dheer Yurub: astaamaha, afka iyo isticmaalkiisa | Saadaasha Shabakadda
Yurub waxay leedahay shabakad dheer oo webiyaal ah oo qulqulaya oo biyo badan siiya dadweynaha. Ku webiga ugu dheer Yurub Waxay ka timid Webiga Volga. Waxay dhex martaa bartamaha Ruushka waxayna gaaraan koonfurta Ruushka, iyagoo faaruqinaya Badda Caspian. Aagga ay qabsadaan waa 1.360.000 km2. Waxaa loo tixgeliyaa inuu yahay webiga ugu dheer Yurub wuxuuna leeyahay astaamo u gaar ah.
Qormadan waxaan kuugu sheegaynaa wax kasta oo aad uga baahan tahay inaad ka ogaato wabiga ugu dheer Yurub iyo astaamaha uu leeyahay.
2 Afka wabiga ugu dheer Yurub
3 Saamaynta deegaanka ee wabiga ugu dheer Yurub
4 Heerarka socdaalka iyo wasakhda
Webiga Volga wuxuu ka soo bilaabmaa Mount Valdai oo u dhexeeya Moscow iyo Saint Petersburg wuxuuna ku daadaa Badda Caspian. Ma aha oo kaliya webiga ugu dheer Yurub, laakiin sidoo kale waa webiga ugu weyn. Dhererkiisu waa 3.690 kiiloomitir, celceliskiisana wuxuu marayaa 8.000 mitir cubic halkii ilbiriqsi.
Baadhitaankeeda biyo-biyoodka waxay ku fadhidaa dhul baaxaddiisu dhan tahay 1.350.000 oo kiiloomitir oo laba jibbaaran, iyadoo kaalinta 18-aad ka gashay adduunka. Sidoo kale waa webiga ugu weyn qaaradda Yurub marka laga hadlayo soo saarista iyo ka bixitaanka biyaha. Waxaa si weyn loogu tixgeliyaa inuu yahay webiga qaranka ee Ruushka. Wadankii hore ee Ruushka, khanate-ka Ruushka, wuxuu ka kacay agagaarka wabiga Volga.
Taariikh ahaan, waa isgoys muhiim ah ilbaxnimada Eurasia. Wabigaan wuxuu dhex maraa kaymaha, jiqda dhirta iyo dhul daaqsimeedka Russia. Afar ka mid ah tobanka magaalo ee ugu waaweyn Ruushka, oo ay ku jirto caasimadda waddanka ee Moscow, waxay ku yaalliin webiga Volga. Qaar ka mid ah keydadka ugu waaweyn adduunka waxay ku yaalliin webiga Volga.
Waxay ka tirsan tahay berkedda xiran ee Badda Caspian waana webiga ugu dheer ee ku qulqula webiga xiran. Webiga Volga wuxuu ka soo kacaa buuraha Valdai oo ku yaal meel sare oo 225 mitir woqooyi galbeed ka xigta Moscow iyo qiyaastii 320 kiilomitir koonfur-bari ee Saint Petersburg, wuxuuna u socdaa dhanka bari ee harada Lake Strzh, Tver, Dubna, Rybinsk iyo Yaroslav Russia, Nizhny Novgorod iyo Kazan. Halkaas ayey uga leexataa xagga koonfureed, dhowr magaalo oo dheeri ah ayey sii martaa ka dibna laga sii daayaa Badda Caspian ee ka hooseysa Astrakhan. 28 mitir ka hooseeya heerka badda.
Meesheeda ugu istiraatiijiga ah, waxay u foorarsataa dhinaca Don. Qaybta sare ee Webiga Volga ee u dhow Staritsa, Webiga Volga ee 1912 wuxuu lahaa wabiyo badan, oo ay ugu muhiimsan yihiin Kama River, Oka River, Vetluga River, iyo Sura River. Volga iyo biyaheeda ayaa sameeya nidaamka loo yaqaan 'Volga River system', kaasoo ku dhex wareegaya aag qiyaastii ah 1.350.000 kilomitir oo laba jibbaaran qaybta ugu dadka badan ee Ruushka.
Afka wabiga ugu dheer Yurub
Maskaxda ku hay in webiga ugu dheer Yurub ay tahay inuu yeesho af weyn. Afkeedu wuxuu leeyahay dherer qiyaastii ah 160 kiilomitir waxaana ku jira illaa 500 kanaal iyo wabiyo yaryar. Qarka ugu weyn Yurub waa meesha kaliya ee Ruushka oo aad ka heli karto xayawaan sida flamingos, pelicans iyo lotus. Qabowga badan ee ka jira aaggan Ruushka awgeed, badiyaa waa la qaboojiyaa inta badan dhererka webiga oo dhan muddo 3 bilood ah sanadka. Bilaha jiilaalka webiga ugu dheer Yurub gabi ahaanba waa qaboojiyey.
Webiga Volga wuxuu daadiyaa inta badan galbeedka Ruushka. Qaar badan oo ka mid ah keydkeeda waaweyn waxay bixiyaan waraab iyo tamarta korantada. Dhererka wabigan waxaa loo isticmaalaa in lagu kordhiyo jiilka tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyadoo la siinayo boodbooda Haydarooliga ee laga dhisi karo webiga ugu dheer Yurub. Kanaalka Moosko, Kanaalka Volga-Don, iyo marin biyoodka Volga-Baltic waxay sameystaan ​​marin biyood gudaha ah oo isku xira Moscow iyo Badda Cad, Badda Baltic, Caspian Sea, Badda Azov, iyo Black Sea.
Saamaynta deegaanka ee wabiga ugu dheer Yurub
Heerarka sare ee wasakheynta kiimikada ayaa si xun u saameeyay Webiga Volga iyo deegaankiisa. Dhirta iyo xayawaanka ayaa saameyn ku leh ficilka bini'aadamka ee wadada oo dhan. Horumarinta tikniyoolajiyadda iyo xilligii warshadaha, waxaa jira dheecaanno badan oo soo afjarma wasakheynta biyaha oo keenaya nidaamyada deegaanka iyo deegaanno ka mid ah noocyo fara badan oo ah dhir iyo xayawaanno in si taban loo saameeyo.
Dooxada webiga waxay leedahay heer sare oo bacrin ah waxayna soo saartaa qamadi badan. Waxa kale oo ku jira ilaha macdanta hodanka ah. Warshad weyn oo saliid ah ayaa ku urursan webiga Volga. Kheyraadka kale waxaa ka mid ah gaaska dabiiciga ah, cusbo, iyo bacriminta qashinka. Volga Delta iyo Caspian Sea waa goobo kalluumeysi. Astrakhan, oo ku taal Delta, waa xarunta warshadaha caviar.
Saameynta kale ee deegaanka ee webiga ugu dheer Yurub waa in badanaa loo adeegsado ujeeddooyin hagitaan. Dhismaha biyo xireenno waawayn sanadihii lagu guda jiray warshadaynta, wabiga Volga xoogaa wuu balaadhay. Muhiimad weyn ayey u leedahay gaadiidka iyo socodka gudaha ee Ruushka tan iyo markii dhammaan biyo xireennada webiga lagu qalabeeyey qufulada maraakiibta iyo maraakiibta leh cabbirro aad u fara badan. Dhammaan doomahaan waxay ka shiraacan karaan Badda Caspian illaa illaa dhammaadka wabiga aagga ugu sarreeya.
Heerarka socdaalka iyo wasakhda
Wasakhda webiga ugu dheer Yurub waxay kortay oo keliya illaa xilligii warshadaha. Waxaa la arkay in 2016, xaddiga uruurinta la oggol yahay ee saliidda iyo waxyaabaha ay ka dhashaan biyaha webiga ayaa kordhay marka la barbar dhigo isla daraasaddan lagu sameeyay 2015. Si aad uga sii darto, isku-ururinta sunta sunta ee 2016 ayaa sii kordheysay sanadka oo dhan.
Waxyaalaha ay ku jirto xaddiga ugu badan ee wasakheynta la helay waxaa ka mid ah birta, meerkurida, iyo nikkel. Horaantii bishii Ogosto ee sanadkaas, Ra'iisul Wasaaraha Ruushka Medvedev wuxuu soo saaray awaamiirta ku habboon ee ah in si deg deg ah loo hirgeliyo qorshaha nadiifinta Webiga Volga. Sida laga soo xigtay macluumaadka ay bixisay Wasaaradda Dabeecadda Ruushka, hirgelinta Qorshaha nadiifinta webiga Volga wuxuu ku kacayaa qiyaastii 34,4 bilyan oo rubi, ama qiyaastii 580 bilyan oo doollarka Mareykanka ah.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto wabiga ugu dheer Yurub iyo astaamaha uu leeyahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Kala bixid » Wabiga ugu dheer Yurub
Waa maxay dhulgariir